शिक्षण अस्पतालमा दुर्लभ ‘ओपन हार्ट सर्जरी’ सफल
प्रकाशित २०७५ भदौ ८ शुक्रबार
काठमाडौं। बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईको नेतृत्वमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा अहिलेसम्मकै दुर्लभ खुल्ला हृदय शल्यक्रिया (ओपन हार्ट सर्जरी) सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
रामेछाप सुनपाती गाउँपालिकाकी २४ वर्षीया (३७ हप्ताकी गर्भवती महिला) प्रमिला अर्यालको मुटुको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न भएको हो । आमा र छोरा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था अहिले राम्रो रहेको शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका डा. भट्राईले जानकारी दिए ।
अर्याललाई टाईप ए अरोटिक डिसेक्शन विथ प्रेगनेन्सी रोग लागेको थियो । सो दुर्लभ रोग हो । यो रोग लागेपछि विरामी बाँच्ने सम्भवना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । तर, मनमोहनको यो ९ वर्षको ईतिहाँसमा पहिलोपटक हो यस्तो रोग लागेका विरामीको सफल शल्यक्रिया भएको डा. भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने,“बच्चा जन्मिँदा बेहोस थियो । तीन घण्टापछि उसको होस आएको छ । आमालाईपनि अहिले भेन्टिलेटरबाट छुट्याएर आईसियूमा सारिएको छ ।”
देशभर थपिए २३ सय ५१ कोरोना सङ्क्रमित, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक हजार ५१ जना
दार्चुलामा मास्कको प्रयोग अनिवार्य, नलगाए कारबाही गरिने
कोरोनाबाट पोखरामा दुई जनाको मृत्यु, मृतक संख्या १ सय १८ पुग्यो
कोरोना माहामारी: बाँकेमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना
असार मसान्तसम्म थप तीन लाख व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण हुनसक्ने
२४ घण्टामा थपिए करिब १७ सय सङ्क्रमित, तीन जनाको मृत्यु